Ọnụahịa na nkọwapụta nke Huawei MatePad 10.4 abanyela | Gam akporosis
Anyị na-adịbeghị anya na-ekwu banyere ọnụ ahịa enwere ike ị nweta mbadamba Samsung Galaxy Tab S6 Lite ọhụrụ ga-enwe na Europe. Ugbu a, anyị abịaghachila ikwu maka njirimara na nkọwapụta teknụzụ anyị ga-ahụ na nke ọzọ Huawei MatePad 10.4 nke ekwentị, mbadamba nkume na-esote n'aka onye na-emepụta ihe na China nke dị nso ịmalite na ahịa.
El Kirin 810 Ọ ga-abụ ikpo okwu mkpanaka nke ga-enye ike na ike na ngwaọrụ a na-echere ogologo oge, ma ọ bụrụ na ihe leaked post azọrọ bụ eziokwu. Anyị ga-ekwesikwa ịdị mma ndị ọzọ dị n'etiti etiti teknụzụ nwere ọnụ a, ma anyị kọwara ha n'okpuru.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya n'aka Huawei MatePad 10.4?
Huawei MatePad 10.4 Ahịa na Leaked ụdịdị
Onye ọrụ Weibo, wepụtara n’aha @ 刘刘看山山的的的, ebipụtala onyonyo anyị kesara n'okpuru n'okpuru nseta ihuenyo. Na nke a, ọ tụrụ aka na MatePad 10.4 nwere ihuenyo akụkụ anọ nwere mkpebi nke pikselụ 2,00 x 1,200. SoC nke ọ na-ebu, dị ka anyị kwuru, bụ Kirin 810, chipset asatọ nwere isi na 2.27 GHz kachasị ọnụego ume ọhụrụ na 7 nm nke amalitere na June nke afọ gara aga. Nchịkọta ahụ kwekọrọ na stylus.
N'aka nke ọzọ, enwere 8 MP n'azụ igwefoto egosiri dị ka otu azụ na-ebute ya na ọkụ ọkụ. Igwefoto n'ihu maka selfies na ndị ọzọ bụkwa 8 MP.
MatePad 10.4 ga-abata n'ọtụtụ nhazi, gụnyere 4 + 64GB ma ọ bụ 6 + 128GB maka ụdị cellular na-akwado kaadị SIM, ebe ụdị WiFi ga-abịa na ụdị 4 + 64GB ma ọ bụ 4 + 128GB. Ọ ga-abịa na ọdụ USB-C, Bluetooth 5.1 ma nwee nnukwu batrị 7,250 mAh nke nwere ike inye ụbọchị nke nnwere onwe n'ụzọ dị mfe. N'otu oge ahụ, ga-agba EMUI 10.1 Lite OS n’ime igbe, nke a na-ekwu na a ga-ahazi ya iji gbatịkwuo ọtụtụ ihe eji eme ihe dịka okwu ọdịyo na vidiyo ma ọ bụ ọbụlagodi.
E nyere ọnụahịa nke mbadamba nkume a dị ka yuan 1.799, nke hà nhata ihe dị ka euro 233 ma ọ bụ dollar 256. Anyị na-echere ụfọdụ ozi sitere n'aka Huawei nke na-egosi na ihe niile edepụtara ebe a bụ eziokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọnụ na nkọwa nke Huawei MatePad 10.4 mbadamba agbapụwo: Kirin 810 n'anya